Firy haingana ny manangona ankizivavy gazety?
Toe-kibo sy tsindry mipetaka - ny nofinofy ankizivavy maro, ary ny hahatratrarana izany valiny izany dia tena marina, ny tena zava-dehibe dia ny miasa mafy. Mba hanaovana izany, dia ilaina ny mahatakatra ny fomba hananganana haingana ny gazety ary ny fanesorana fatim-be loatra. Zava-dehibe ny tsy fanaovana fanatanjahan-tena, fa koa hanova ny fahazarana amin'ny sakafo.
Teny voalohany momba ny sakafo. Zava-dehibe ny manaisotra sakafo be kalôria ary manamboatra menio mifototra amin'ny legioma vaovao, voankazo, proteinina sy serealy. Omeo sakafo mahavelona sy misotro rano be dia be.
Ny fitadiavana ny fomba hifehezana tsara ny fanontam-pirinty , dia zava-dehibe ny hihaino tsara ny fampiofanana, izay handraraka kalôria mihen-danja sy hamolavola ny hozatra. Afaka manao fanazaran-tena isan'andro ianao, satria mahatsapa haingana ny hafetsen'ny gazety. Ny asa dia ny haino aman-jery ambony sy ambany, ary koa ny hozatry ny hatsiaka.
Ny fomba haingana hananganana ny famoaham-baovao dia mitaky ireto fampiharana manaraka ireto:
Mipetraha eo an-damosinao ary atsangano ny tongotrao, atositoy ny lohalika, mba hahatonga ny feny ho toy ny vatany. Atsangano ny vatana ambony ary mitsangàna eo amin'ny gorodona miaraka amin'ny elany. Aza manongilan-tsofina ary tazony mafy ny gazety. Ampifanitsio ny tongotra havia na havanana.
Mandritra ny lamosinao, mandohaliha ny lohalinao ary atokàny eo akaikinao ny tananao. Atsangano ny tapany ambony amin'ny vatana sy ny tongotra amin'ny fotoana iray, manamboatra ny rambony, mandroaka ny rambony avy amin'ny tany ary mitondra ny lohalika eo amin'ny tarehinao.
Makà toerana maromaro, mitsangatsangana amin'ny tananao, izay tokony ho eo ambany tratra. Atsangano koa ny ankavia, avy eo ny tongotra havanana, mitarika ny lohalika mankany amin'ny soroka mifanohitra.
Ankoatra izany, dia manolo-tena ny hampiasa fomba fitsaboana kosmetika. Ny vokatra tsara dia omena amin'ny rakotra , ohatra, miorina amin'ny ala na tanimanga.
Fanatanjahantena ho an'ny atodin'ny feny
Ahoana ny fomba hanesorana ireo vala any aoriana?
Ahoana ny fantsehana ny hozatry ny gazety?
Fihetseham-batana ho an'ny lavaka
Biby honey - ratsy sy tsara
Fahatakarana-inona izany ary ahoana no fomba hahatratrarana izany?
Sokafy miaraka amin'ny cowberry
Azo atao ve ny manova fiainana?
Faharoa faharoa amin'ny vehivavy - antony
25 varavarana hafakely, mitovy amin'ny fidirana amin'ny toerana hafa
Irina Sheik dia nahagaga tamin'ny akanjom-boninahitra an-tsary miaraka amin'ny sarin'i Marilyn Monroe
Furosemidy ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana
Calendula - toetra mahasoa
Fonony ho an'ny bisikileta
56 ny antony hifindra any Finlandy izao